Sacuudiga Imaaraadka iyo Xulufadooda OO sharuudo adag ku xiray Dawlada Qatar | Jubbaland Media Online
Sacuudiga Imaaraadka iyo Xulufadooda OO sharuudo adag ku xiray Dawlada Qatar
Posted on June 23, 2017 in Wararka // 0 Comments
Xulafada uu hoggaamiyo Sacuudi Carabiya ayaa shuruudo adag ku xiray heshiis ay la galaan dowladda Qatar, iyagoo soo bandhigay liis ay ku qoran yihiin 13 dalab oo laga doonayo inay Qatar fuliso, hadii ay rabto in laga qaado xayiraada ay saareen.
Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta, Baxreyn iyo Masar ayaa ugu horeyn ka dalbaday Qatar inay albaabada u laabto Telefishinka Al- Jazeera.
Waxaa kaloo ay ka dalbadeen inay jarto xiriirka ay la leedahay Iiraan iyo inay xirto Saldhiga uu Turkiga ku leedahay Qatar iyo inay joojiso xiriirka ay la leedahay Ururada Argagixisada.Xulafada uu Sacuudiga hoggaamiyo ayaa u qabtay Qatar inay muddo 10 maalin gudahood ku fuliso shuruudahan.
Shuruudahan ayaa lagu dhawaaqay, kaddib markii Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanka Rex Tillerson uu dalalka Khaliijka ugu baaqay in dalabkooda uu noqdo mid sabab leh oo wax laga qaban karo Dowladda Qatar ayaa horay isaga fogeysay inay taageero dhaqaale siiso Ururada Argagixisada, isla markaana ay qeyb ka tahay degenaansha la’aanta ka jirta Gobolka.
Dhamaan Shuruudahan ayaa ah kuwo adag oo aanay macquul aheyn inay fuliso Qatar, maadaama Qatar ay saaxibo weyn la tahay dalka Turkiga, sidoo kalena Iiraan dhowaan ay dalkeeda u soo dirtay shixnad raashi ah Qatar ayaa waxaa xilligan saaran xayiraad dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed, iyadoo laga xirtay hawada, dhulka iyo badda wadamada ay xiisada kala dhaxeyso.